RAZANA HITA TENY AMORON-DALANA : Nisy andian-jatovo nisoloky mba hahazo famangiana
Tranga hafahafa nanaitra ny sain’ny maro no niseho teny amin’ny faritry ny Kaominin’Ambohimanambola iny. 15 février 2018
Rangahy iray no hita faty ary tsy fantatra izay fianakaviany. Nisy nilaza tampoka fa azy ireo ny razana. Araka ny loharanom-baovao voarainay teo am-panoratana dia lehilahy efa somary lehibe sy nahazo taona no hita nitsirara teny amoron-dalana. Karazany irony olona sahirana sy tsy manan-kialofana irony io lehilahy io raha ny fanazavan’ny teny amin’ny manodidina.
Vokatr’izay tranga izay dia nisahotaka ny fokonolona afak’omaly tontolo noho ny fahitana izany teo an-tanàna. Tsy fantatra ny fianakaviany sy ny mombamomba azy saingy nisy andian-jatovo maromaro no nilaza fa fianakavian’izy ireo izy io. Samy talanjona ny rehetra satria tsy misy taratasy manamarina izany teny amin’ireto farany.
Marihina koa anefa fa olona tsy nipetraka teo amin’ny manodidina io rangahy hita faty io raha ny filazan’ny mponina ary olona sahirana sy mpangataka eny amoron-dalana ireny. Avy hatrany dia nandray andraikitra ireo fokonolona ary noraisina aloha ny razana ka nampandre ny lehiben’ny fokontany izy ireo mba hifampidinika amin’ny tokony hatao.
Araka ny fanampim-panazavana voaray tamin’ireo mponina teny an-toerana hatrany dia nanamafy izy ireo “ fa noho ny fitiavam-bola diso tafahoatra dia saika hosolokian’ireo andian’olona ireo hatao fangalana vola famangiana io vatana mangatsiaka io raha tsy nadray fepetra haingana ny teo amin’ny manodidina ».